FANAFIHANA MITAM-BASY :: Ben'ny tanàna maty voatifitra teo akaikin’ny tranony • AoRaha
FANAFIHANA MITAM-BASY Ben’ny tanàna maty voatifitra teo akaikin’ny tranony
Valifaty sa asan-jiolahy ? Notifirin’ny lehilahy iray i Hedaraly Nathaly, Ben’ny tanànan’ ny kaominina Antsahanisia any Toliara II, afak’omaly tokony tamin’ ny 8 ora sy 45 minitra. Nindaosin’ny fahafatesana teo no ho eo ity olom-boafidy ity. Nitsoaka any anaty ala kosa ny lehilahy iray antsoina hoe Rebona, ahiana ho nahavanon-doza tamin’izany fahafatesan’ olona izany. Efa karohina izy, amin’izao fotoana izao. Fantatra fa folo metatra miala ny tranony no namoizan’ilay olom-boafidy ny ainy.
“Nisy olona roa lahy nandeha môtô nifanena tamin’ny Ben’ny tanàna, vantany vao nivoaka ny tranony izy. Niarahaba azy ny iray tamin’izy ireo. Ny faharoa kosa avy hatrany dia niala teo ambony môtô. Nofinganin’ itsy lehilahy faharoa ilay olom-boafidy ka nianjera. Iny izy nianjera iny no notifirin’iretsy roa lahy teo amin’ny tratrany sy ny vatany. Bala telo no nahavoa azy », hoy ny tatitra avy amin’ny loharanom-baovao any an-toerana.
Voalaza ho jiolahy malaza ny iray tamin’ireo nitifitra na i Rebona. “Manana kakay amin’ny Ben’ny tanàna maty izy satria efa nitory azy noho ny asan-jiolahy nataony, rehefa mampitaraina ny mponina ny nataony. Heverinay fa izay no antony nitifiran’izy ireo azy”, hoy kosa ny fanazavan’ny mpanampy ny depiote voafidy tany Toliara II, Sandrahy Leonard Cliff.
Nisy ny fanenjehana nataon’ny zandarimaria sy ny fokonolona ary io mpanampy ny depiote ao Toliara II io mba hikarohana an’izay nahavanon-doza tany amin’ny tanànan’izy ireo antsoina hoe Beravina-Antsohihy, taorian’ ny fahafatesan’ilay Ben’ny tanàna. “Tonga tany izahay saingy mbola tafatsoaka ireo ahiana ho nahavanon-doza. Rehefa nahatazana anay izy ireo dia mbola nitifitra ihany koa. Nisy ny fifampitifirana. Notorohana tamin’ny grenady izy ireo saingy tafatsoaka ihany na dia mety ho nisy naratra mafy aza”, hoy ihany ny loharanom-baovao.
Tezitra mafy tamin’ izao famonoana ny Ben’ny tanànany izao ireo mponina ao Antsahanisia. Vao mainka nanampy izany fahatezeran’izy ireo izany ny tsy nahatrarana ireo tondroiny ho mpamono olona tao an-tranony. “Nodoran’ireo mponina avy hatrany ny tranon’ireto olona ireto, sao hampiverina azy ireo saingy tsy nitodi-doha intsony ry Rebona sy ireo namany”, araka ny fitantaran’ny mpiara-miasa akaiky amin’ny depiote Toliara II.
“Betsaka ireo olona nanatri-maso ny zava-nitranga. Karohina ireo nahavanon-doza amin’ izao fotoana izao. Mino izahay fa ho voasambotra tsy ho ela izy ireo. Azo raisina ho valifaty no antony namonoana ny Ben’ny tanàna satria tsy naka na inona na inona tany aminy ireo namono azy”, hoy indray ny fanampim-panazavana avy amin’ny zandarimaria any Toliara.
Manodidina ny 50 taona ity olom-boafidy namoy ny ainy ity. Isan’ ireo olona tena mamim-bahoaka ao amin’ny kaominina Antsahanisia izy.
Nicolas Dupuis “Ataoko ho ampy ahy satria efa lafo amin’ny Malagasy ny karamako”
Voina teny an-dalana Mpandeha bisikileta main’ny herinaratra tamin’ny andrin-jiro
Loza tany Mampikony Maty nazeran’ny môtô ity ben’ny tanàna teo aloha
Fahafatesana an-kalamanjana Lehilahy lehibe namoy ny ainy teo an-tsisin-dalana
FANAKANAN-DÀLANA :: Voatafika indray ny fiara iray tany amin’ny lalan’i Maintirano
Trangam-piainana mampalahelo Nitondra fangirifiriana mandra-maty ity tovovavy nofaohin’ny fiara
Herisetra ara-nofo Vehivavy lehibe, 78 taona, naolana sy novonoina rehefa avy noratraratraina